I-CNG Jumbo Cylinder-CNG yezoThutho noGcino-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-SinoCleansky CNG iisilinda ezinkulu ziveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela elilinganayo lomntu wesithathu.
Uxinzelelo oluphezulu lwesilinda sejumbo lusetyenziswa kakhulu ekugcineni igesi kwimizi-mveliso, isikhululo se-CNG, ukuthuthwa, isityalo esivelisa amandla, umzi mveliso wefektri njl. Kuya kunciphisa ukulahleka koxinzelelo kunye nokuvuza ngenxa yokuhamba umgama omde, ukonga amandla ngakumbi, uqoqosho ngakumbi.
Umthamo omkhulu wokugcina, ubungakanani obahlukeneyo, ukhuseleko kunye nokuthembeka, ukusebenza okuzinzileyo, ukuthuthwa ngokulula, ukubonakala okuhle, ukuguquguquka
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-17.4mm yesilinda eseludongeni, ngaphandle kwedayimitha engama-559mm
CNG,Iigesi zeMizi-mveliso ezinje ngeargon, nitrogen, umoya, hydrogen njl.
Umthamo wamanzi (L)
Ukusebenza / Uvavanyo lovavanyo (MPa)
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-14.8mm yesilinda eseludongeni, ngaphandle kwedayimitha engama-559mm
Iigesi ezixineneyo nezinyibilikisiweyo ngaphandle komngcipheko wokufakwa kwe-hydrogen ngokungqinelana ne-ISO11114-1: 2012
I-CNG iisilinda ezinkulu zinokuthunyelwa zizikhongozeli eziqhelekileyo, izikhongozeli ezivulekileyo eziphezulu ngokusekwe kubungakanani. Iisilinda ziya kusiwa ngokhuselo olukhethekileyo ukuba zikhona.
Izilinda zinengxelo yovavanyo yomntu wesithathu kunye nengxelo eneenkcukacha yomzi-mveliso. Umntu wesithathu unokuba yi-BV, TUV, okanye abanye. Imvume ye-TPED inokukhutshwa kwiintlobo ezithile zesilinda.
Sinoluhlu lwemveliso esele lukhona ukuze ulujonge kwaye ukhethe; Okanye ungasixelela ukuba kufuneka ukugcwalisa okuphakathi / uxinzelelo olusebenzayo / umthamo wamanzi / ukuSebenza (ukuGcina indawo yokumisa okanye ukuhambisa izinto eziphakathi), emva koko siya kuncoma imodeli efanelekileyo kuwe;
Kuthekani ngezivalo nezinye izinto ezibandakanyekileyo?
Kwivelufa, sinokubonelela ngophawu lwesiTshayina okanye uphawu lwelizwe jikelele (njengeParker, iDK njl.